Location: Mbido » Ịdee » Aviation » Boeing 777X rutere Dubai maka 2021 Dubai Airshow
Boeing 777X rutere Dubai maka 2021 Dubai Airshow.
Ụgbọelu Boeing 777-9 na-anwale ụgbọ elu na-eme mpụta mbụ ya na mba ụwa, na-efega n'akwụsịghị akwụsị site na Seattle gaa United Arab Emirates.
Boeing 777X ga-egosipụta na Dubai Airshow malite na Nọvemba 14, 2021.
N'ịwulite na ụlọ ọrụ kachasị mma nke ezinụlọ 777 na 787 Dreamliner, ndị 777-9 ga-abụ ụgbọ elu ejima ejima kachasị na nke kachasị arụ ọrụ n'ụwa.
Ezinụlọ 777X nwere ngụkọta nke iwu 351 na nkwa sitere n'aka ndị ahịa asatọ na-eduga gburugburu ụwa.
Boeing 777X ọhụrụ rutere Dubai World Central na 14:02 pm (GST) taa, n'ihu Dubai Airshow na-abịa. Ụgbọ elu ahụ ga-adị na ngosipụta kwụ ọtọ ma gosipụta ya na mmemme ofufe nke ihe nkiri ahụ na-amalite na Nọvemba 14.
Ụgbọ elu nnwale ụgbọ elu 777-9 mere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa iri na ise na-akwụsịghị akwụsị site na Seattle. Boeing Ubi ka Dubai, ụgbọ elu mba ụwa mbụ na ụgbọ elu kachasị ogologo ruo taa maka 777X ka ọ na-aga n'ihu na-eme mmemme ule siri ike.
N'ịwulite na ụlọ ọrụ kachasị mma nke ezinụlọ 777 na 787 Dreamliner, ndị 777-9 ga-abụ ụgbọ elu ejima ejima na-arụ ọrụ nke ọma n'ụwa, na-ebuga 10% mma mmanụ, ikuku na ụgwọ ọrụ karịa asọmpi na onye njem pụrụ iche. ahụmahụ. Ezinụlọ 777X nwere ngụkọta nke iwu 351 na nkwa sitere n'aka ndị ahịa asatọ na-eduga gburugburu ụwa. A na-atụ anya ibuga ụgbọ elu mbụ na ngwụcha afọ 2023.
Boeing na-azụlite, rụpụta na ọrụ ụgbọ elu azụmahịa, ngwaahịa nchekwa na sistemụ oghere maka ndị ahịa na mba 150. Dị ka onye na-ebupụ US kacha elu, ụlọ ọrụ ahụ na-enye ikike nke ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ iji kwalite ohere akụ na ụba, nkwado na mmetụta obodo. Ndị otu Boeing dị iche iche na-agba mbọ imepụta ihe ọhụrụ maka ọdịnihu na ibi ndụ ụkpụrụ ụlọ ọrụ nke nchekwa, ịdịmma na iguzosi ike n'ezi ihe.
Qatar Airways na-akwado Nzukọ Ọchịchị Kwa Afọ 54 nke Arab Air Carriers' Organisation na Doha
"Mgbasa ozi Uganda" a na-agbanwe njem nlegharị anya...
Njem nlegharị anya Cologne
Ụgbọ elu Ukraine International na-akwụsịtụ…
Nlele Ọbara ọhụrụ iji buru amụma ọrịa Alzheimer
Ụgbọ elu na-amalite 'zụta ugbu a, kwụọ ụgwọ ma emechaa'...
Ọgwụgwọ dị mma maka enweghị ọmụmụ nwoke na nwanyị
Ryanair CEO: Ụgbọ elu ga-arị elu n'oge okpomọkụ a
Kedu ihe kpatara ọtụtụ ndị America ji na-eyi mkpuchi?
Ọgwụ ọhụrụ nwere ike ime maka ọrịa kansa na ọrịa na-efe efe
Ọkwa Mmepe Ahịa Ibuprofen API, Asọmpi...
Onye ọrịa mbụ na nnwale ụlọ ọgwụ maka ọrịa shuga na-adịghị ala ala…
Ndị nwe oke Airbus kwadoro mkpebi ọhụrụ 2022 AGM
Kpọọ maka nghọta na ọrụ ọha site na...
Air Transat na WestJet weputara transatlantic ọhụrụ…
Amụrụ ka ọ bụrụ anụ ọhịa na izu ọgba tum tum Laconia
China nyere iwu obodo nke nde 4.5 n'ime ụbọchị atọ COVID…
Washington, DC na Baltimore jikọrọ ọnụ maka FIFA World…
Ndụmọdụ ịkwọ ụgbọala dị mma maka izu ụka ncheta ụbọchị
Njem njem Malaysia ga-enweta ahịa Middle Eastern na ATM…
Ndị agha Sri Lanka nwere ike ịgbapụ ugbu a masịrị ha n'ihi...
Pakistan Tourism Development Corporation ebubo na…
Dan Pimental Strategy ekwu, sị:
November 14, 2021 na 05: 18
Daalụ maka nnukwu post. Ọ masịrị m ịgụ akwụkwọ a nke ọma iji chọọ ide akụkọ a magburu onwe ya na ntinye aka na-enye aka ekele maka ịkekọrịta. Chọgharịa ndepụta akụkọ na edemede a na-atọ ụtọ na isiokwu dị ka ahụike, obi ụtọ, nrụpụta na ihe ndị ọzọ.